म्यादी बीमा पुल व्यवस्थापन गर्ने चार कम्पनीले संकलन गरे सवा अर्ब, कुन कम्पनी अगाडि ? – Insurance Khabar
म्यादी बीमा पुल व्यवस्थापन गर्ने चार कम्पनीले संकलन गरे सवा अर्ब, कुन कम्पनी अगाडि ?
प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७६, बुधबार १६:१७
काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको म्यादी बीमाको पुल व्यवस्थापन गर्दै आएका चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आवको छ महिनामा करिव सवा एक अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
बीमा समितिले बैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने नेपाली कामदारका लागि गर्दै आएको म्यादी बीमाको पुल व्यवस्थापक चार कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएको छ । सोही बमोजिम चार वटा कम्पनीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको म्यादी जीवन बीमा गर्दै आएका छन् ।
म्यादी बीमा गर्नको लागि हाल श्रम तथा रोजगार विभागमा १४ जीवन बीमा कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । म्यादी बीमा गर्नको लागि हाल चार बीमा कम्पनीहरुले मात्रै पुल प्रणाली मार्फते सेवा दिइरहेका छन् । हाल नेशनल लाइफ, सूर्या लाइफ, युनियन लाइफ र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले म्यादी बीमा गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्मम जीवन बीमा कम्पनीहरुले वैदेशीक रोजगार बीमाशुल्कबाट एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । चारवटा बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्ममा वैदेशीक रोजगार बीमा मार्फत ८ लाख २२ हजार १ सय ४७ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै म्यादी जीवन बीमा शुल्क सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सले गरेको छ । सो कम्पनीले ४६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा ३ लाख ३३ हजार ६ सय ६५ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । त्यस्तै, नेशनल लाइफले ३ लाख ७२ हजार ४ सय ९९ वटा बीमालेख बिक्रि गरेर २४ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
नयाँ दुई कम्पनी मार्फत युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अगाडी रहेको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा २२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, रिलायबल लाइफले ६६ हजार २ सय ९५ वटा बीमालेख बिक्रि गरेर कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।